News - ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး / ဖြတ်စက်၏ထူးခြားချက်များနှင့်ခွဲခြားခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး၏အသုံးပြုမှုနယ်ပယ်။
ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး / ဖြတ်တောက်ခြင်း disc ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ခွဲခြား, ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး၏အသုံးပြုမှုအတိုင်းအတာ:
နေ့စဉ်အသက်တာ၌ကျွန်ုပ်တို့က၎င်းကိုအာရုံစိုက်ပါကအိမ်အလှဆင်ရာတွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကြမ်းပြင်၊ သတ္တု၊ သစ်၊ သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများအားတပ်မက်သောပုံစံသို့လျှော့ချသည်။ သတ္တုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သတ္တုဖြတ်စက်သည်လိုအပ်သော်လည်းလက်ရှိစွမ်းရည်ကောင်းမွန်သောဖြတ်စက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပွန်းစားခြင်းအပိုင်းပိုင်းဖြတ်နေကြသည်။ ဖြတ်တောက်သောအပိုင်းအစများ၏ကြမ်းတမ်းသောပစ္စည်းများက၎င်းတို့သည်ကြိတ်ဘီးများဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ၄ င်းတို့၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာပွန်းစားခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအစေးများဖြစ်သည်။ သူတို့၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာလိုချင်သောဖြတ်တောက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်သာမာန်သံမဏိ၊ သံမဏိနှင့်သတ္တုမဟုတ်သောပစ္စည်းများဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပုံသဏ္aာန်တစ်လှည့်လည်ပါးလွှာသောစာရွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး၏ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စရိုက်များရှိပြီးအဓိကအားဖြင့်ဖန်မျှင်နှင့်အစေးဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားပစ္စည်းများနှစ်ခုအားဖြည့် bonding ပစ္စည်းများလုပ်ဖို့အသုံးပြုကြသည်။ အချောထုတ်ကုန်များသည်အရည်အသွေးကောင်း၊ ဆန့်နိုင်သည့်ခိုင်ခံ့မှု၊ ၎င်းကိုသာမန်သံမဏိ၊ သံမဏိ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ထူးကဲသောနည်းပညာသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းအရာ ၀ တ္ထုများ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအပိုင်း၏မြင့်မားသောဖြတ်တောက်နိုင်မှုကိုသေချာစေသည်
ပစ္စည်းများအရ, ဖြတ်တောက်ခြင်း disc ကိုအဓိကအားဖိုင်ဘာ resin ဖြတ်တောက်အပိုင်းပိုင်းနှင့်စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းအပိုင်းပိုင်းခွဲခြားထားတယ်။
1. စေးဖြတ်တောက်ခြင်းဓါးအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်, ဗဓေလသစ်၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်သံမဏိ၊ သံမဏိနှင့်အခြားခက်ခဲသည့်ဖြတ်တောက်သည့်ပစ္စည်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ ဖြတ်တောက်သောအခါ၎င်းကိုခြောက်သွေ့သောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်စိုစွတ်သောဖြတ်တောက်ခြင်းအပါအ ၀ င်နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဖြတ်တောက်ခြင်းဓါးကိုပိုမိုတည်ငြိမ်သောတိကျစွာအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဖြတ်တောက်ခြင်း၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဖြတ်တောက်သောအပိုင်း၏ပစ္စည်းနှင့်မာကျောမှုကိုရွေးချယ်သည်။ ၎င်းသည်ဖြတ်တောက်မှုထိရောက်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။
2. စိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး။ ၎င်းသည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်မကြာခဏတွေ့နိုင်သောဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤဖြတ်တောက်ခြင်းအပိုင်းကိုကျောက်၊ ကွန်ကရစ်၊ လမ်းအသစ်များနှင့်အဟောင်းများ၊ ကြွေထည်စသည့်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောပစ္စည်းများပြုပြင်ရာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောစိန်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုအဓိကအားဖြင့်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အဆိုပါ matrix သည်အဓိကပံ့ပိုးပေးသောအပိုင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကို cutter head နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အသုံးပြုသော်လည်းစိန်အမှုန်များကို cutter head အတွင်းရှိသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ရှုးခေါင်းကိုအဓိကအားဖြင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းကိုမကြာခဏဖြတ်တောက်သောကြောင့်ဖြတ်စက်၏ခေါင်းကိုအသုံးပြုခြင်းခံရလိမ့်မည်၊ သို့သော် matrix တွင်မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုမျှမရှိပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ဖြတ်စက်၏ ဦး ခေါင်းသည်စိန်ပါသောကြောင့်, ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်။ စိန်သည်လက်ရှိတွင်တွေ့ရှိရအခက်ခဲဆုံးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်စက်၏ခေါင်းကိုဖြတ်လိုသည့်အရာဝတ္ထုကိုပွတ်လိုက်လျှင်၎င်းသည်အရာဝတ္ထုကိုဖြတ်ပစ်လိမ့်မည်။